26 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 473 Views စာ0မှတ်ချက် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, Hans Burkhard Schlömer, Jens Kronvold ဖရက်ဒရစ်, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego Star Wars, Nebulon-B ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘော, သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, လည်စည်းဗုံးခွဲ, UCS, UCS သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး
အဆိုပါ Lego Star Wars ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအနိုင်ရခဲ့သော Republic Gunship ကိုသူတို့ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ခဲ့သည်ကိုဒီဇိုင်နာများကဖော်ပြခဲ့သည် Ideas အနာဂတ် Ultimate Collector စီးရီးအစုံရှာတွေ့မှစစ်တမ်း။
အဆိုပါ prequel-trilogy ကသင်္ဘောအလားအလာ UCS TIE ဗုံးကြဲလေယာဉ်နှင့် UCS ကျော်အောင်ပွဲ Nebulon-B ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘော - အင်ပါယာမှလာသည့်မိုးသီးနှစ်လုံးလုံးပြန်ကျော့သွားသည် - အလွန်များပြားသောအကွာအဝေးဖြင့်ဖြစ်သည်။ အချို့ 30,000 လူသို့မဟုတ်မဲဆန္ဒရှင်အားလုံး၏အကြမ်းအားဖြင့် ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Republic Gunship ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အဲဒီရလဒ်ယခုအဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, သြဂုတ်လ 1 ရက်နေ့တွင်စင်ပေါ်ပေါ်တွင်ဆင်းသက်တော်မူပါလိမ့်မယ် Lego prequel-trilogy ကို Ultimate Collector Series အစုံများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Group မှစိုးရိမ်သည် Star Wars ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ၁၀၂၁၅ Obi-Wan မှ Jedi Starfighter မှပထမဆုံး Episode I-III UCS ကိုထုတ်လုပ်ရန်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့သည်။
“ မင်းတို့ပြောတာကြားဖူးတဲ့သင်္ဘောတွေကိုရွေးလိုက်တယ် Lego Jens Kronvold ဖရက်ဒရစ်ဆင်၊ Lego Star Wars Creative Lead မှရှင်းပြသည် Brick Fanatics။ “ ဒါတွေအားလုံးဟာဒါတွေအားလုံးပဲလေ။ ဒါကြောင့်ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူမှုမှာကျွန်တော်တို့ဟာဘာပဲရွေးရွေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့ကြရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဟာ Republicans Gunship (သို့) prequel မော်ဒယ်လ်ဖြစ်လို့အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ”
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အနာဂတ်တွင်နောက်ထပ် prequel-trilogy UCS အစုံများကိုမြင်တွေ့ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုပါသလော။ သာလျှင် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship ရောင်းအားကောင်းသည် - အနည်းဆုံး set ၏ဒီဇိုင်းပညာရှင် Hans Burkhard Schlömer၏အဆိုအရ၊ Brick Fanatics ကြောင်းအနာဂတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သတ်မှတ် ယင်း၏အောင်မြင်မှုအပေါ်မူတည်သည်.
သင်ရွေးနိုင်လိမ့်မယ် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship ဒါကြောင့်ရောက်ရှိအဖြစ်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်ကနေ LEGO.com နှင့် Lego အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုလှိုင်းနှင့်အတူသြဂုတ်လ 1 ရက်နေ့တွင်စတိုးဆိုင်များ Lego Star Wars အစုံ။ ထိုအတောအတွင်းထွက်စစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်သုံးသပ်မှု အဆိုပါအထင်ကြီး (နှင့်အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင်ကြီးမား) ၏ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship.
ကြောင်းအလုပ်ထောက်ပံ့စဉ်းစားပါ Brick Fanatics ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုခြင်း (အချိန်ကြွလာသောအခါ) သင်၏ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပြု တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← LEGO ကိုအနိုင်ရ Star Wars: 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder များအတွက် Mandalorian အမြန်စက်ဘီး
Lego Batman 76238 Classic တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ Batman ကြိုတင်မှာကြားရန် Cowl ရရှိနိုင်ပါသည် →